Vitsy ny nanoina ny antson’ny mpitaky ny « Iles Eparses » : niatrana ny Emmo/Far, nirava maina ny hetsika | NewsMada
Tsy hanasarika ny olona fanentanana nataon’ireo mpitarika ny hetsika fitakiana ireo Nosy manodidina “Iles Eparses”, omaly tetsy Ambohijatovo. Niatrana ny Emmo/Far ary rava main any hetsika avy eo. Ny mpitandro filaminana indray no maro noho ny olona tonga teny an-toerana.
Tsy voarindra sady efa kely hery ka vitsy nanoina ? Tsy tanteraka araka ny niheveran’ireo mpitarika azy ny hetsika fitakiana ny hamerenana amintsika ireo Nosy manodidina, « Iles Eparses » tetsy Ambohijatovo. Tokony ho nanao diabe hihazo an’Analakely sy ny masoivohon’i Frantsa, Ambatomena izy ireo, saingy, nosakanan’ny mpitandro filaminana hatramin’ny farany.
Efa niatrana mialoha ny mpitandro filaminana, notarihin’ny Jly Rakotomahanina Florens. Tonga ireo mpitarika, nanomboka tamin’ny 9 ora mahery. Anisany, Rajaonah Andrianjaka, Andriamihaja Solonavalona, Joseph Yoland, ny mpitarika ny AKFM, Rakotomanga Eric…
Nifanositosika amin’ny mpitandro filaminana teo izy ireo. Nanomboka teny amin’ny fiantsonan’ny taxi-be, nikisaka teo amin’ny Handicap International ary niverina teo ampitan’ny minisiteran’ny Tanora. « Tsy nahazo alalana ianareo…. Manaova taratasy any amin’ny prefet indray.… », hoy ny eo anivon’ny Emmo/Far.
Efa vaky sy miparitaka ireo mpitarika
Nisoko mangina, nanempotra ireo rehetra teo koa ny vovoka baomba mandatsa-dranomaso ka nahakofona ny maro.
Nampiasa « mégaphone » nanentanana ireo mpitaky saingy, efa nokasain’ny mpitandro filaminana halaina an-keriny izany ka voatery najanona.
Nirava ihany anefa izany avy eo ary notomerin’ny mpitandro filaminana nateriny, niakatra any Ambondrona Rajaonah Andrianjaka, hany sisa tavela amin’ireo mpitarika. « Hifamotoana any Andravoahangy foibe isika amin’ny alatsinainy, hanohizana ny tolona », hoy izy nialoha izany.
Tsiahivina fa efa vaky tsy niara-dia amin’izy ireo ny mpitarika sasany. Vitsy koa ireo tanora mba resy lahatra. Tsy hita taratra ny lamina sy ny fanentanana ny momba ity resaka « Iles Eparses » ity. Tsy mahagaga raha nihena an-toerana ireo tonga teny Ambohijatovo. Ny mpitandro filaminana indray no maro anisa, raha mitaha amin’ireo mba namaly ny antso !